Mashruuca Mashruuca Maddaarka Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul ee TBM Tunnels dhameystiray xafladaha | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMashruuca Mashruuca Maddaarka Diyaaradaha Magaalada Istanbul ee TBM Tunways dhameystiray
xafladda dayax gacmeedka garoonka diyaaradaha ee istanbul
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan loolanka adeegga illaa inta ay ka neefsanayaan.
Erdogan wuxuu ka qeybgalay Shirweynihii Gayrettepe-Kagithane ee Maddaarka Istaraatiijiyadeed ee Magaaladda TBM Tunways oo Dhameystiray Dhameystiray Shirweyne muuqaal ah halkaasna khudbad ka jeediyay.
Waxyaabaha lagu soo qaaday khudbadda Erdogan waa sida soo socota:
- Waxaan aragnaa nalka kadib muddo ku dhow 2 sano. Dhibaatada gaadiidka ee garoonka diyaaradaha Istanbul ayaa gebi ahaanba la xallin doonaa.
- Sida mashruuc kasta, waxaan ku hirgalinay xarumaha qaran ee maxalliga ah. Gegada diyaaradaha, oo cabirkiisu ku yaal garoonkeeda, waxay gacan ka geysan doonaan Istanbul si ay u noqoto magaalo adduunka ah.
- Waxaan aragnay noocyadii ugu dambeeyay ee isbitaallada qolka-1000-ka ah oo ku yaal Yekilköy iyo Sancaktepe. Waxaan furi doonnaa xafladda ka dib waxaan fureynaa xarunta caafimaad ee ka tagtay Abdülhamit ee Hadımköy.
- Turkey ka dhigi doonaa hawsha isagoo salka caafimaad. Waxaan caan ku nahay isbitaalada magaaladeena.
- U adeegista Istanbul waa arrin iimaan leh. Istanbul waxay filaysaa adeeg, ma ahan cudurdaar.
- Waxaannu la kulannaa baahiyaha Istanbul, iyadoo aan loo eegayn hay'addee ay ku taal. Waxaan u soo saarnaa daawooyin loogu talagalay baahi kasta oo ka jirta Istanbul.
- Safkoodu waa mid cidhiidhi ah. Waxaan aad u danaynaynaa dalxiiska caafimaadka si aad ah. Weydii haddii ay ogyihiin wax garoon diyaaradeed oo u dhow Sancaktepe.
- Dhibaatooyinka qaar waa la dareemi karaa, Waxaan u maleynayaa haddii aan u dulqaadanno kuwan, inaan dhaqso uga soo kabsan doonno dhibaatada Coronavirus.
- Haddii aan addeecno tallaabooyinka aan qaadnay, waxaan si dhakhso leh uga gudbi doonnaa shaqadan sida ay qabaan dalalka adduunka.
- Waxaan taageero saaxiibada our dalka Turkiga.
- Mashruuc kasta oo cusub oo aan bilownay aad ayaan ugu faraxsanahay. Waan sii wadi doonnaa loolanka adeegga illaa inta neefteenna u dambeysa.
- Waad geli kartaa magaaladan haddii aad qalbigaaga oo dhan ku dhejiso si aad u fahamto macnaha magaaladan. Waxaan dadaal ugu jirnaa inaan kor ugu qaadno Istanbul heerka ay mudan tahay.
- Ma joogsaneyso, coronavirus nama joojin doono.
- Howlgallada kale ee khadkayaga metro ayaa si dhakhso leh loo dhammeystiri doonaa waxaana rajeynayaa inay dhamaato kahor waqtiga bartilmaameedka.
- Mashruucan wuxuu ku siin doonaa faa'iidooyinka Turkiga.
- Waxaan aragnay muhiimadda ay leedahay heerka aan waddankeenna gaarsiinay 18-kii sano ee la soo dhaafay mar labaad 2dii bilood ee la soo dhaafay.
CPCs ugu horeysay gudaha Turkey ee Istanbul
Mashruuca Sahaminta Nidaamka Isku Xirka Wadada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul 3-da Mashruuc Sahan iyo…
Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy metro mashruuca mitirka 126 gawaarida ayaa iibsaday aracı
Istanbul BB Kartal - Mashruuca Mashruuca Kaynarca hazırlık
Jidadka hoostada ayaa noqon doona waddada baaskiilka
Trabzon - Wadada Aşkale iyo Gümüşhane Tunnels Mashruuca Korontada iyo korantada…
Mashruuca Çakraz Tunnels Ultra wuxuu ku guuleystey qandaraaska korantada iyo korantada yapecm
Konak Tunnels 24 waxay furanaysaa Maajo
Masaafurinta duufaannada loogu talagalay gaadiidka Turku